Search by category name or video name
× ပြကွက်နှင့်သင်ခန်းစာများ စင်တင်ပြကွက်များ Live Chat မျက်လှည့်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင် FAQ Terms & Condition Help and Feedback အကြောင်းအရာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ
‘မျက်လှည့်’ ဝန်ဆောင်မှု ၏ 2022 အထူး Lucky Draw အစီအစဉ်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ
၁။​အသုံးပြုသူသည် ‘’မျက်လှည့်’’ ဝန်ဆောင်မှု ကို MPT ဖုန်းနံပတ်များအသုံးပြု၍ ဝန်ဆောင်မှု ရယူထားရမည် ဖြစ်သည်။
၂။​တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားသော MPT အသုံးပြုသူများ (MPT ဆင်းမ်ကဒ်အသုံးပြုသူ)၊ အနည်းဆုံး အသက်တစ်ဆယ့်ခြောက်နှစ်ပြည့်ပြီးသော မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် ‘မျက်လှည့်’ ဝန်ဆောင်မှု ရယူထားသောသူများ (အသစ်/အဟောင်း)သည် ဤ 2022 အထူး Lucky Draw အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
၃။​ပရိုမိုးရှင်းကာလအား ရက်(၉၀) သတ်မှတ်ထားပြီး ဆုရွေးချယ်သည့်အချိန်တွင် ဝန်ဆောင်မှုအား အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်ရမည်။
၄။​ပရိုမိုးရှင်းကာလသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၆) ရက်နေ့ မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ (၁၃) ရက်နေ့အထိ ရက်(၉၀) ဖြစ်ပါသည်။
၅။ 2022 အထူး Lucky Draw အစီအစဉ် အတွက် ပေးအပ်သွားမည့် ဆုများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
- (ပထမအကြိမ်) MPT ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ် (၃,၀၀၀) ကျပ် (၁၂) ဆု
- (ဒုတိယအကြိမ်) MPT ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ် (၃,၀၀၀) ကျပ် (၁၂) ဆု
- (တတိယအကြိမ်) MPT ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ် (၃,၀၀၀) ကျပ် (၁၂) ဆုအပြင် အထူးဆုများဖြစ်သည့် Lenovo Tablet M8 (၁) ဆု ၊ MPT ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ် (၂၀,၀၀၀) ကျပ် ၂ဆု နှင့် MPT ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ် (၁၀,၀၀၀) ကျပ် ၃ဆု တို့ ဖြစ်ပါသည်။
ပရိုမိုးရှင်းကာလရက်(၉၀)အား (၃) ကြိမ်ခွဲ၍ ကံထူးရှင်များကို မဲနှိုက်ရွေးချယ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ (၁၆) ရက်နေ့ မှ ၂၀၂၂ ဇွန်လ (၁၄) ရက်နေ့အထိ ပထမ အကြိမ်
၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၁၅) ရက်နေ့ မှ ၂၀၂၂ ဇူလိုင်လ (၁၄) ရက်နေ့အထိ ဒုတိယအကြိမ်
၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၁၅) ရက်နေ့ မှ ၂၀၂၂ ဩဂုတ်လ (၁၃) ရက်နေ့အထိ တတိယအကြိမ် စုစုပေါင်း (၃) ကြိမ် ဖြစ်ပါသည်။
၆။​ကံထူးရှင် ရွေးချယ် ကြေညာပေးမည့် ရက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။
(ပထမအကြိမ်) ကံထူးသူများအား ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၂၀) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား ရွေးချယ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကံထူးရှင်များအား ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ (၃၀) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
(ဒုတိယအကြိမ်) ကံထူးသူများအား ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၂၀) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား ရွေးချယ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကံထူးရှင်များအား ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၃၁) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
(တတိယအကြိမ်) ကံထူးသူများအား ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ (၂၀) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား ရွေးချယ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကံထူးရှင်များအား ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ (၃၁) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး ပေးအပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၇။​အထူးဆု Lenovo Tablet M8 ကို လာရောက်ထုတ်ယူရန် ကြေညာသည့်ရက်မှစ ၂၀၂၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ မှတ်ပုံတင်မူရင်းနှင့်လူကိုယ်တိုင် သတ်မှတ်ထားသောနေရာတွင် လာရောက်ထုတ်ယူရပါမည်။
ယခု ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ် အခြေအနေများကြောင့် သေချာစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီး အတည်ဖြစ်ပါက နီးစပ်ရာ ကားဂိတ် အထိပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိလျှင်ဆုကိုအခြား အကျုံးဝင် သင့်လျော်သောပါဝင်ယှဉ်ပြိုင် ဝန်ဆောင်မှုရယူသူကို ပေးအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
၈။​ဆုအမျိုးအစားများနှင့် ကံစမ်းမဲပေါက်သူများကို ရွေးချယ်ရန်အပါအဝင် 2022 အထူး Lucky Draw အစီအစဥ် နှင့် ပတ်သက်သော မည်သည့်အခြေအနေကိုမဆို Myanmar Teleapex Group နှင့် MPT တို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကသာ နောက်ဆုံးအတည်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်တောင်းဆိုမှုများ၊ စုံစမ်းမှုများ၊ အပြောင်းအလဲနှင့် အပေးအယူများကို ပြုလုပ်သွားမည် မဟုတ်ပါ။
၉။​ပရိုမိုးရှင်းနှင့်ပတ်သတ်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက 09 450577111 , 09 444033211 သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
“မျက်လှည့်” ဝန်ဆောင်မှု ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ
“မျက်လှည့်” ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးမပြုမီ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ဖတ်ရှုနားလည်သိရှိထားရန်လို အပ်ပါသည်။
ဤစည်းမျဉ်းစည်းများအရ “မျက်လှည့်” ဝန်ဆောင်မှု ကို စီမံဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ သင်သည် “မျက်လှည့်” ဝန်ဆောင်မှု သို့ ဝင်ရောက်အသုံးပြုနေသူဖြစ်ပါက ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သဘောတူလက်ခံပြီးဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပါသည်။ ဤစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ၏ အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို လက်ခံသဘောတူညီမှုမရှိပါက “မျက်လှည့်” ဝန်ဆောင်မှု ကို အသုံးပြုနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
၁။ “မျက်လှည့်” ဝန်ဆောင်မှုအား MPT ဆင်းမ်ကတ်အသုံးပြုသူများအားလုံး အခပေးစနစ်ဖြစ် အသုံးပြုနိုင် ပါသည်။ MPT ဆင်းမ်ကတ်ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ဆင်းမ်ကတ်အသုံးပြုရန် ပိုင်ရှင်၏ခွင့်ပြုချက် ရရှိထားသူများကို အခပေး သုံးစွဲသူအဖြစ် သတ်မှတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
၂။ “မျက်လှည့်” ဝန်ဆောင်မှုအား အသုံးပြုသူသည် အောက်ဖော်ပြပါ စည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များကို သဘော တူညီမှုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
၁။ ။စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုအပ်သည့်အချိန်၌ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြည့်စွက်ခြင်း စသည်တို့အားလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ ထိုဆောင်ရွက်မှုများ အကောင်အထည်ပေါ်လာပါက စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အသစ်များကို စတင်အသုံးမပြုမီ ၁၅ ရက်ခန့် ကြိုတင်၍ အကြောင်းကြားနိုင်ရန်ကြိုးစားပါမည်။
၂။ ။“မျက်လှည့်” ဝန်ဆောင်မှုကို အခပေး အသုံးပြုနေသော သူများအတွက် အခါအားလျှော်စွာ ကျင်းပပြု လုပ်လေ့ ရှိသော Promotion များနှင့် အခြားသော Campaign များအတွက် လိုအပ်သောစည်းမျဉ်းစည်းများကို လိုအပ်သလို ထုတ်ပြန် ကြေငြာသွားမည်ဖြစ်ပြီး အငြင်းပွားမှုကိစ္စ အကြောင်းအရာ တစ်စုံတစ်ရာ ရှိခဲ့ပါက “မျက်လှည့်” ဝန်ဆောင်မှု ဆုံးဖြတ်ချက် အတိုင်းသာ သဘောတူ နားလည်ပြီး လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ကို သိရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။
၃။ ။ သုံးစွဲမှုအတွက် ပြည့်မီရမည့်သတ်မှတ်ချက်
ဤဝန်ဆောင်မှုသည် အသက်တစ်ဆယ့်ရှစ် (၁၈) နှစ် သို့မဟုတ် ၎င်းအထက်ရှိ (MPT SIM အသုံးပြု နေသည့်) MPT သုံးစွဲသူများအတွက်သာ ရည်ရွယ်ပါသည်။ အကယ်၍လူကြီးမင်းသည် အသက်တစ်ဆယ့်ရှစ် (၁၈) နှစ် အောက် ဖြစ်ပါက ဥပဒေအရ မိဘ သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူ ခွင့်ပြုချက်ရှိပြီး စည်းကမ်းချက်များကို ချုပ်ဆိုရန် စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အရည်အချင်းအပြည့်အဝရှိမှသာလျှင် ဤဝန်ဆောင်မှု ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါမည်။
လက်ရှိအသုံးပြုလျက်ရှိသော“မျက်လှည့်”ဝန်ဆောင်မှုသည် စာရင်းပေးသုံးစွဲ သောဝန်ဆောင်မှု ရယူထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ “မျက်လှည့်” ဝန်ဆောင်မှု အတွက် တစ်ရက်လျှင် ၉၉ ကျပ် သာ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အဖိုးအခ ကောက်ခံသည့် အကြိမ်ရေမှာ စဉ်ဆက်မပြတ် နေ့စဉ် ကောက်ခံမှုရှိ သည့် ၃၆၅ ရက် ပက်ကေ့ချ် ဖြစ်ပါသည်။ စာရင်းပေးသုံးစွဲမှုအမျိုးအစား ဝန်ဆောင်မှု၏ တရားဝင်မှု ကာလမှာ ၃၆၅ ရက်ဖြစ်ပါသည်။
လူကြီးမင်း၏လက်ကျန်ငွေမလုံလောက်လျှင်အဖိုးအခကောက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် ငွေကောက်ခံခြင်းမရှိပါက လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ထိုနေ့အတွက်ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
လက်ကျန်ငွေလုံလောက်သည့်အချိန်မှသာ အဖိုးအခကောက်ခံခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်းအား ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ပါမည်။
Application အားအသုံးပြုရန် အောင်မြင်စွာ စာရင်းပေးသွင်းပြီးပါက SMS ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်သည်။
နောက်ကြောင်းပြန်၍ ငွေကောက်ခံခြင်းပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပါ။ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် ငွေကောက်ခံ ခြင်းမရှိလျှင် ထိုနေ့များအတွက် လူကြီးမင်းထံမှ အဖိုးအခကောက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။
လူကြီးမင်းအနေဖြင့် စာရင်းပေးသုံးစွဲမှုကို အတည်ပြုပြီး လူကြီးမင်းကို ငွေကောက်ခံသည့် နေ့မှစ၍ လူကြီး မင်းကို တစ်ဆက်တည်း ရက်ပေါင်း (၉၀) အတွက် ငွေကောက်ခံထားခြင်း မရှိပါက စာရင်းပေးသုံးစွဲမှု အလိုလျောက်ရပ်စဲမည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ဝန်ဆောင်မှုကို အခမဲ့မဟုတ်သော စမ်းသပ်အသုံးပြုသည့် ကာလတစ်ခုအတွက် စာရင်းပေးသုံးစွဲ ရန် တောင်းဆိုမှုပြုလုပ်ပြီး လူကြီးမင်းထံတွင် လုံလောက်သော ငွေလက်ကျန်မရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် လူကြီးမင်းအား နောင်လာမည့် တစ်ဆက်တည်း နေ့ရက် သုံး(၃) ရက်အတွင်း ငွေကောက်ခံရန် ကြိုးပမ်းသွား ပါမည်။ လူကြီးမင်းတွင် လုံလောက်သော ငွေလက်ကျန်မရှိဘဲ ထိုတစ်ဆက်တည်း (၃) ရက်အတွင်း ငွေ ကောက်ခံမရရှိပါက ဝန်ဆောင်မှု စာရင်းပေးသုံးစွဲရန် တောင်းဆိုမှု အလိုအလျောက် ရပ်စဲမည်ဖြစ်သည်။
လူကြီးမင်း၏ အကြောင်းအရာအား ရှာဖွေမှုပြုခြင်းနှင့် ဒေါင်းလော့လုပ်ခြင်းအတွက် ဒေတာအဖိုးအခ ကျသင့် ပါမည်။ ကောက်ခံမှုအားလုံးတွင် ကုန်သွယ်ခွန် ၅% ပါဝင်မည်ကို သတိပြုပါ။
ဝန်ဆောင်မှုအတွက် စာရင်းပေးသုံးစွဲခြင်းအပါအဝင် ၎င်းချည်းသာဟု ကန့်သတ်မထားဘဲ လူကြီးမင်း၏မိုဘိုင်း အင်တာနက်ကို မျှဝေသုံးစွဲသည့် တတိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ ပြုမူဆောင်ရွက်ချက်အတွက် လူကြီးမင်းတွင် တာဝန်ရှိပါသည်။
ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် Myanmar Teleapex Co.LTD ၏ Magic Application နှင့် သုံးစွဲသူကြား သဘောတူညီချက် ဖြစ်ပြီး Myanmar Teleapex Co.LTD မှ အချိန်မရွေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဤသဘောတူညီချက်သည် Application စတင်အသုံးပြုသည့်နေ့မှစ၍ အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်ပြီး မသုံးစွဲတော့သည်အထိတိုင် ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာကျင့်သုံးရမည်ဖြစ်သည်။ ဝန်ဆောင်မှုရယူပြီးပါက တစ်ရက်လျှင် ဝန်ဆောင်ခအနေဖြင့် ၉၉ကျပ်နှုန်းဖြင့် ကောက်ခံသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နားလည်မှုလွဲခြင်း ကိစ္စရပ်များအား ရှောင်ရှားရန်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုစတင်အသုံးပြုသည့်နေ့စွဲအား စာရင်းပေးသွင်းသည့်နေ့စွဲအတိုင်းဖြစ်ကြောင်း ယူဆမည်ဖြစ်သည်။
Terms and conditions of “Magic” Service
You should have known and agree the following Terms and Conditions (the “Terms”) before using Magic Portal Service. The application is being operated according to these terms and conditions. By taking service and using the application, you signify that you have read, understood, and agree to be bound by these Terms and Conditions and any other applicable rules, policies and terms associated therewith (collectively, the “Terms”).
If you cannot accept and agree the Terms, you would not be able to use the application.
All MPT SIM card users are able to use “Magic” service by accepting of charging daily service fees. MPT users who agree the Terms and use the application will be recognized as daily paid user.
If you would like to use “Magic” service, you should have to follow and accept the following terms and conditions.
1. We have the right for amendment and supplement of the Terms if it is necessary.
If we would really need to carry out those actions, we would firstly inform all users 15 days in advance.
2. There will be occasional special promotions and campaigns for users and the necessary Terms for those promotions and campaigns will be announced in time. You properly should have known that if there were any argument concerned with those promotions and campaigns, only the decision of the application would be confirmed.
Ongoing use of Service requires an active Subscription. A Chit Ka Bar (Love Portal) service fees is 99 Ks/day. Charging frequency is daily charging with 365 days package. The validity period ofaSubscription-type Service is 365 days.
If you have insufficient balance, you will not be charged. If payment is not charged for any reason, you will not be able to use the Service on that day.
There is no retroactive charging of payment. You will not be charged for days when payment is not charged for any reason.
The Subscription will be automatically terminated if payment is not charged for 90 consecutive days from the day you have confirmed the Subscription and been charged.
These above rules are the agreement for the Magic application of Myanmar Teleapex Group Company and the user and they can be changed at any time from Myanmar Teleapex Group Company. This agreement will be eligible from the date of subscription until subscription, these terms and conditions must be in accordance with enforcing. After subscription, the service fee, 99 Kyats will be charged per day. In order to avoid misunderstanding issues, the service using date will be considered as the service subscription date.
© Copyright Myanmar Teleapex Group.